मधुपर्क २०६७ असार – मझेरी डट कम
तिमीले माया गर्नैपर्छ, भन्ने पनि कर छैन
आखिर माया पाए पनि, जीवन जिउने भर छैन ।
टोलाउने सम्झनाहरू जोडेर गयौ तिमीले
बोलाउने एउटा नाम छोडेर गयौ तिमीले ।
बल्ल खाटा बसेथ्यो
तिमीले दिएको घाउको
पुनश्चः उही खाटा
फुस्क्यो एउटा डिपार्टमेन्ट पसल
कान्छा, तिम्रो कसम
कान्छा तिमीले भन्थ्यौ-
तिम्रो कसम, तिम्रोलागि
म त जे पनि गर्छु,
तिम्रै निम्ति हाँस्छु, तिम्रै निम्ति रुन्छु
नेपाली साहित्यमा करिब दुई दर्जनजति साहित्यिक आन्दोलनहरू आइसकेका छन् । जसमध्ये नारीमाथि केन्दि्रत वा नारीद्वारा घोषित कुनै साहित्यिक आन्दोलन वा अभियान आउन सकेको छैन । हुनसक्छ, यही अभावलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले नारी समानता र स्वतन्त्रताको उद्घोष गर्दै कवयित्री दीपा एवाई राईले समुच्च विचारको प्रतिपादन गरेका छन् । उनले समुच्च साहित्य/विचार शृङ्खलाको रूपमा अर्धवृत्त कवितासङ्ग्रह प्रकाशित गरेका छन् ।
मानिसले आफ्नो जीवनकालमा अनेक दुःखकष्ट भोगेको हुन्छ, हण्डर र काष्टिहरू काटेको हुन्छ, उकाली-ओरालीहरूमा यात्रा गरेको हुन्छ । समयको गतिशील प्रवाहसँगै निरन्तर बग्ने जीवनका भोगाइहरू एकनासका कसैका पनि हुँदैनन् । सुख र व्यस्ततामा दुःखले काटेका दिनहरू अन्तर्मनमा छोपिएका हुन्छन् तर जब दुःख र पीडाले छोप्दछ, मान्छेले त्यसलाई भुसभित्रको आगोजस्तै गरी खोसि्रएर बाहिर निकाल्दछ ।
सामाजिक विषयवस्तुको उपन्यास
नेपाली उपन्यासको फाँटमा स्थापित नाम हो शंकर भारती । २०४१ सालमा अर्को जुनीमा उपन्यास प्रकाशन गरेर नेपाली उपन्यासकारको रूपमा उदाएका भारतीको ‘महापुरुषको सन्तान’ बजारमा आएको छ । भारतीको उपन्यास महापुरुषको सन्तानले मूलतः सामाजिक विषयवस्तुलाई चित्रण गरेको पाइन्छ । उपन्यासको घटनाक्रम सेठ भक्तमानका दुई छोराहरू जय र अजयले प्रथम श्रेणीमा एम.एस.सी. उत्तीर्ण गरेको खुसीयालीमा आयोजना गरेको पार्टीको परिवेशलाई लिएर अगाडि बढेको छ ।
विभाजित विश्वभित्रको समदर्शिता
केही वर्ष पहिलेसम दुर्लभ नेपाली महाकाव्यविधालाई आज युवापुस्ताले उर्वर बनाउँदैछन् । काव्य स्रष्टा कलानिधि दाहालद्वारा लिखित ‘विभाजित विश्व’ महाकाव्य नै यसको उदाहरण हो । विचार, धर्म, जात-जाति, संस्कार र खानपानको संकीर्णताभन्दा माथि उठेर ‘विभाजित विश्व’ बीचको विभेद खाडल सम्याउने समदर्शी सोचलिएर पहिलोपटक काव्यकारको रूपमा कलानिधि उदाएका छन् ।
विविध विधाका सशक्त साधक वासु शशी अहिले हामीसामु छैनन् तापनि उनीद्वारा रचित कविता, उपन्यास, अनुदित कृति र नाटक भने अमूल्य निधिका रूपमा रहेका छन् । उनको मृत्यु झण्डै दुई दशकपछि मात्र उनको सिनेनाटक ‘बुद्ध’ प्रकाशनमा आएको छ । यो यति चर्चित कृति अहिलेसम्म त्यसै रहनु दुःख लाग्दो कुरा हो ।
नेपाली साहित्यमा उपन्यास कम लेखिने र बढी पढिने विधामा पर्दछ । उपन्यास विधा साहित्यको यस्तो विधा हो जसमा जीवनको साङ्गोपाङ्ग वर्णन गरिएको हुन्छ । त्यसैले उपन्यास भन्नु जीवन र जगत्को आद्योपान्त वृत्तान्त भएको लामो कथा हो । उपन्यासका यिनै अभिलक्षणलाई हृदयङ्गम गरी लेखिका ललिता ‘दोषी’ले ‘उन्माद’ नामक उपन्यास साहित्यिक बजारमा ल्याएकी छन् । छब्बीस परिच्छेदसम्म विस्तारित यस उपन्यासमा समसामयिक सामाजिक वस्तुयथार्थ प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । यस हिसाबले प्रस्तुत उपन्यासलाई सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास भन्न सकिन्छ ।
भाका फुर्ने गीतहरू
पुष्कर बुढाथोकी 'साउँतेली'
कविता र गीत विधाका हस्ताक्षर भावेश भुमरीद्वारा लिखित नवीनतम् गीतसङ्ग्रह हो भित्र छ फूलो साँध । प्रस्तुत सङ्ग्रहमा भोगिराखेको जीवनलाई सोचाइ र अनुभूतिका रङले रङ्गाएर गीतका माध्यमद्वारा चित्रण गरेका छन् भावेशले । मर्यादित र शालीन शब्दमा प्रस्तुत ६४ वटा गीत रचना रहेका छन् सङ्ग्रहमा । भाव, यात्रा, लय र हार्दिकताको राम्रो समन्वय भएका गीतहरू पढ्दै जाँदा पाठकलाई आनन्द लाग्छ । हरेक गीतहरू विभिन्न भावले अभिव्यक्त भएका छन् ।
हिन्दी साहित्यका प्रमुख कवि तथा नाटककार डा. धर्मवीर भारती (१९२६-१९९७) को नाट्यकृति ‘अन्धायुग’ नेपाली भाषामा प्रकाशित भएको छ । यस नाटयकृतिलाई ‘अन्धोयुग’ शीर्षक दिई निरञ्जन बरालले अनुवाद र प्रकाशन गरेका हुन् । ‘गुनाहोका देवता’, ‘सुरजका सातवाँ घोडा’ जस्ता महìवपूर्ण कृतिका स्रष्टा डा. भारतीको ‘अन्धोयुग’ प्रसिद्ध भारतीय नाटक हो । यस नाटकलाई रङ्गमञ्चीय दृष्टिले समेत एक कालजयी नाटक मानिन्छ । यस्तो कृतिलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर निरन्जन बरालले प्रशंसनीय काम गरेका छन् ।
जीवनका पाश्र्व अनुभूतिहरू
कविता जीवनकै सापेक्षतामा लेखिएको जीवनप्रतिकै दृष्टिकोण हो । जीवनका यिनै शाश्वत् पक्षहरूलाई अत्यन्त नजिकबाट नियालेकी छिन् कवि मिश्र वैजयन्तीले पाश्र्व आवाजमा । पाश्र्व आवाज उनको नवीनतम् कवितासङ्ग्रह हो । मोरङका समकालीन कविता (सहलेखन, २०६०) र समवेदनाका नागबेलिहरू (हाइकुसङ्ग्रह, २०६२) प्रकाशित गरेकी वैजयन्ती यो कविता सङ्ग्रहमार्फत सशक्त कविको रूपमा दरिन पुगेकी छिन् । त्यसो त पूर्वमा उनको साहित्यिक उपस्थिति सशक्त र उत्साहबर्द्धक छ । अब यो कृतिले उनलाई सिङ्गो काव्य फाँटमा अलग पहिचानका साथ उभ्याएको छ ।
पाँच दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको लघुकथा विधा पचासको दशकयता व्यापकरूपमा पल्लवित तथा पुष्पित भइरहेको छ । आजको व्यस्त समय, प्रविधिको साम्राज्य, यान्त्रिक जीवनशैली तथा प्रचुर मनोरञ्जनात्मक साधनहरूको विगविगीले गर्दा आमपाठक थोरै शब्दबाट धेरै सन्देश दिने क्षमता भएको लघुकथा विधातर्फ आकषिर्त भइरहेका छन् । साहित्यका चार विधाहरू आख्यान, काव्य, निबन्ध र नाटकमध्ये लघुकथा आख्यान साहित्यको स्वतन्त्र उपविधाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
यस वर्ष नेपाली साहित्यको आख्यान विधामा आन्विका गिरी, किरण रिमाल र अमर न्यौपानेजस्ता आसलाग्दा नामले प्रवेश गरेका छन् । यी नवोदित प्रतिभाहरूको लेखनीमा आत्मविश्वास, भाषालाई खेलाउन जान्ने सीप र जीवन र जगत्लाई हेर्ने-बुझ्ने सूक्ष्म अन्तदृष्टि प्रचुर मात्रामा देखिएको छ, जसको प्रशंसा हुनुपर्दछ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मध्य दिन हो । चौबीस घण्टे कर्फ्यु घोषणा गरिएको छ । फोन सेवा काटिएको छ । प्रेस, एम्बुलेन्सजस्ता अति आवश्यक कुराहरूलाई पनि पास उपलब्ध गराइएको छैन । मञ्चमा मधुको कोठा देखिन्छ । त्यो कोठा दुई तलामा छ । कोठामा मधु र रिमा मात्रै छन् । मधु करिब २६ वर्षको र रिमा करिब २२ वर्षकी छे । रिमा गर्भवती छे, आजभोलि नै डाक्टरले उसलाई समय दिएको छ । रिमा कोठामै बसेकी छे । पृष्ठभूमिमा आन्दोलनको नारा सुनिन्छ । एम्बुलेन्स ओहोरदोहोर गरेको आवाज पनि सुनिन्छ । उसलाई अलिअलि पेट दुखेको छ । रिमा झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेकी छे । कर्फ्युको सूचना आउँछ ।
मनमा उम्रिने तीन न तेह्रका तरङ्गहरूलाई कागजका पानामा उतारी टोपल्ने आफ्नो नानीदेखि लागेको बानी । अठार-बीस वर्षको उखरमाउले उमेरमा प्रेमका तर्कनाहरू खुब उमि्रँदारहेछन् मनमा । त्यो बेला कवितात्मक शैलीका थुप्रै प्रेमपत्रहरू लेखियो । त्यस्ता शैलीका प्रेमपत्रकै कमालले कविता नामकी केटीलाई जीवनसाथी बनाउन सफल भएको गोप्य कुरा पनि आज खोलिदिएँ । उमेर अलि छिप्पिँदै गएपछि र साथीभाइहरूले भटाभट किताब निकाल्दै विमोचन गर्दै समोसा खुवाउँदै गरेको देखेपछि मलाई पनि किताब निकालौँनिकालौंँ भएर आयो । पुरानो बक्सा छान मार्दा एउटा किताब निकाल्न पुग्ने प्रेमकविताहरू भएको जस्तो लाग्यो । एक साँझ कुखुराको आधा किलो मासु ल्याएर अनेक मरमसला र भएभरको सीप लगाएर मीठो पारेर पकाइवरी आफ्नी धरमपत्नी धनकुमारी (कविता त पिरेम पर्दाको नाम मात्रै पो रहेछ ) लाई पेटभरि खुवाएँ । उनी अत्यन्त प्रसन्न भइन् । त्यही मौकामा मैले अनेक भूमिका बाँधेर अन्त्यमा एउटा कविताको किताब छाप्ने आफ्नो पुरानो घिडघिडो रहेको कुरो सुनाएँ । बूढीले प्रसन्न चित्तले सकारात्मक जवाफ दिएपछि मैले भोलिपल्ट बिहानै कविताहरू लगेर कम्प्युटरमा घान हाल्न लगाएँ ।
समयले समर भन्न थालेको छ
कुकुरहरू बौराएर भुकिरहेछ
हत्केलाले छोप्न खोज्ने आगोको फिलिङ्गा
चर्को घाम कडा परेर जगमा सुख्खा छ सारा चीज
तिर्खाले मुख आँ… गरेर दिनमा सुक्छन् गराका बीज ।
सुख्खा भैकन वैलिएर नमरून् भन्दै फिँजाई दया
आयो फेरि घुमी असार महिना उल्लास बोकी नयाँ ।।
मन खुलेको छैन
आकाश खुले पनि
बम, बारुद र गोलीका आवाजहरू